18 USC § 2257/2257A - Akhri Webtoon Korean Manhwa - Manhua - Manga iyo Novel Novel Online bilaash ah
Iyadoo la raacayo Xeerka Xuquuqda Qoraalka Millennium -ka ee 1998 (Xafiiska Xuquuqda Qoraalka Mareykanka), milkiilayaasha iyo hawlwadeennada
Freecomiconline.me waxay si degdeg ah uga jawaabi doontaa sheegashooyinka ku xadgudubka xuquuqda lahaanshaha ee lagu wargaliyay wakiilka xuquuqda daabacaadda ee Freecomiconline. Fadlan ogow in sida ku xusan qaybta 512 (f) ee DMCA (17 USC § 512 (f)), qof kasta oo si ulakac ah si khaldan u muujiya in maaddada ama waxqabadku ay ku xad -gudbeyso waxaa laga yaabaa in lagu qaado mas'uuliyad.
Haddii aad rumaysan tahay in shaqadaada nuqul -nuqulka loo soo guuriyay si ka dhigan ku -xad -gudubka xuquuqda daabacaadda, fadlan sii wakiilka xuquuqda daabacaadda ee Freecomiconline macluumaadka soo socda:
Saxeexa jir ahaan ama mid elektarooni ah ee qof loo oggolaaday inuu ku dhaqmo isagoo ka wakiil ah mulkiilaha xuquuqda gaarka ah ee lagu eedeeyey inuu jabiyey;
Aqoonsiga shaqada xuquuqda lahaanshaha ee la sheegay in lagu xad gudbay, ama, haddii xad -gudubyo badan oo xuquuqda daabacaada hal goob online ah ay daboolayso hal ogeysiis, liis wakiil ka ah shaqooyinkaas;
Aqoonsiga maaddada la sheeganayo in lagu xad -gudbayo ama ay tahay mawduuca ku -xadgudubka iyo in laga saaro ama marin loo helo taas oo ah naafo, iyo macluumaad macquul ahaan ku filan si loogu oggolaado Freecomiconline inay hesho agabka (sida URL ama lambarka fiidiyaha);
Macluumaad macquul ahaan ku filan si loogu oggolaado Freecomiconline inay kula soo xiriirto: magaca, cinwaanka, emaylka, lambarka taleefanka, haddii la heli karo;
Qoraal ah in kooxda cabashada qabtaa ay aaminsan tahay rumaysad wanaagsan oo ah in isticmaalka maaddada sida loo dacwooday aysan oggolayn milkiilaha xuquuqda lahaanshaha, wakiilkiisa, ama sharciga; iyo
Bayaan ah in macluumaadka ku jira ogeysiiska uu yahay mid sax ah, oo ciqaabtiisu tahay been -abuurka, in laguu oggol yahay inaad u shaqayso wakiilka xuquuqda gaarka ah ee la sheegay in lagu xadgudbay.
18 USC § 2257/2257A Bayaanka U-hoggaansanaanta Shuruudaha-Diiwaangelinta.
Freecomiconline.me ma aha soo -saare wax kasta iyo dhammaan waxyaabaha ku jira mareegaha (Freecomiconline.me). Iyada oo la tixraacayo diiwaannada sida ku cad 18 USC § 2257 wixii kasta iyo dhammaan waxyaabaha laga helo boggan, fadlan si naxariis leh codsigaaga ugu hagaaji goobta loogu talagalay in la soo saaro.
Freecomiconline.me ma aha soo -saare wax kasta iyo dhammaan waxyaabaha ku jira mareegaha (Freecomiconline.me) sida lagu qeexay 18 USC §2257 iyo 28 CFR 75 sidaas darteedna waa laga dhaafay shuruudaha diiwaangelinta.
Freecomiconline.me waa goob wadaag sawir oo u oggolaanaysa soo -dejinta, wadaagista iyo daawashada noocyada kala duwan ee waxyaabaha dadka waaweyn iyo halka Freecomiconline.me ay sida ugu wanaagsan u qabato xaqiijinta u hoggaansanaanta.
Freecomiconline.me waxay u hoggaansan tahay habraacyada soo socda si loo hubiyo u hoggaansanaanta:
U baahan dhammaan isticmaaleyaasha inay ahaadaan 18 jir si ay u soo dhejiyaan sawirro.
Marka la soo dejinayo, adeegsaduhu waa inuu xaqiijiyaa waxa ku jira; Xaqiiji in isaga/iyada ay tahay 18 sano jir; cadeeyo inuu isagu/iyadu hayo diiwaanada tusaalayaasha ku jira waxa ku jira iyo inay ka weyn yihiin 18 sano.
Xaqiiji in nuxurka la soo rarayo uu yahay mid uu leeyahay adeegsaduhu ama ay sharci ahaan u haystaan ​​ruqsad ay ku rartaan, daabacaan, ku wadaagaan waxyaabaha gacanta ku jira.
Waxaan si xoog leh u aaminsanahay in dhammaan moodooyinka, jilayaasha, jilaayaasha, iyo dadka kale ee lagu muujiyey matalaad muuqaal ahaan galmo ahaan ah oo ku yaal degelkan ay ahaayeen 18 sano ama ka weyn waqtiga abuuritaanka. Waxaan si xoog leh u aaminsanahay in soo -saare kasta oo nuxurkiisu ka muuqdo boggan uu u hoggaansamayo 18 USC §2257, oo ku yaal degelkooda/boggooda.
Freecomiconline.me waxay ballanqaadeysaa inay ku dadaali doonto sidii ay ku heli lahayd oo u joojin lahayd sawirrada ama/iyo cajaladaha.
Wixii caawimaad dheeraad ah, fadlan la xiriir [emailka waa la ilaaliyay] u hogaansanaanta.